သက်တန့်ချို: အဖေသွားနှင့်ပြီ သမီးလေးရေ
Posted by သက်တန့်ချို at 2:33 PM
May Khin October 22, 2012 at 7:33 PM
လူ့လောကမှာ အကောင်းအဆိုးကို အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ ..မှာရင်း....
Father should have taught his daughter how to respect and treat the parent in proper way and to realize the actual life since she was young. Because of he failed to do so, he actually lived very sadly and also leave his daughter with full of regrets.
ပျိုးယုဝသုန် October 24, 2012 at 2:42 PM
အဲ့ဒီလို နောင်တ ဆိုးတွေ ရမှာ သိပ်ကြောက်တယ် အစ်ကို..
အလင်းသစ် November 3, 2012 at 1:13 AM
"အဖေတို့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိသလို သားသမီးတွေကလည်းအဖေတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး ။ "
ဟုတ်တာပေါ့အကို... တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်လည်း အဖေ့ကို ငြိုငြင်တာမျိုး စိတ်ကွက်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးတယ်.... သူထမ်းတင်လို့ ဒီနေရာရောက်လာတဲ့ ကျွန်တော်က ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဖေက မဝင်ဆန့်နိုင်တာ စိတ်ကွက်ခဲ့ဖူးတယ်။။ အဖေက ဘယ်လိုပဲ ခွင့်လွှတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ နောင်တကြီးတော့ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တည်ခဲ့ရတယ်။။။
ရန်ကုန်သူ November 5, 2012 at 1:36 PM
သိမ့် December 9, 2012 at 8:27 PM
မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို သားသမီးတိုင်း နားလည်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် အစ်ကို ညီမကိုယ်တိုင်တောင် အများကြီး ကြိုးစားရဦးမှာပါ
သိမ့် December 9, 2012 at 9:49 PM
သား သမီးတိုင်း မိဘကျေးဇူးကို နားလည်ဖို့ကြိုးစားရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကို ပေးစွမ်းထားတဲ့ အတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ် အစ်ကို နောက်ထပ်လည်း ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာကောင်းတွေ ညီမတို့ ကို မျှဝေပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
Zaw Lin December 20, 2012 at 2:20 AM
Zaw Lin December 20, 2012 at 2:22 AM
Zaw Lin December 20, 2012 at 2:23 AM
sw December 20, 2012 at 11:46 PM
လုံးသိပါတယ် ဒီတောသားသမီးတွေကို သားတို့သမီးရယ်ရယ် အဖေတို့အမေတို့အတွတ်လိမ္မာကြပါ ဆိုးလဲချစ်မှာ
ပါဘဲ အဖေတို့အမေတို့က မချစ်ဘဲမနေနိုင်လို့ပါ
aung yewin December 21, 2012 at 7:23 AM
aung yewin December 21, 2012 at 7:26 AM
juni htet December 21, 2012 at 3:49 PM
MP Kpg December 26, 2012 at 7:13 PM
linn moez December 30, 2012 at 10:13 AM
linn moez December 30, 2012 at 10:20 AM
နောမှတတာ နောင် တ ပဲ
linn moez December 30, 2012 at 10:29 AM
နောင် တရဲ့ အသိ
သက်မှုးအိမ် December 30, 2012 at 12:42 PM
မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ (၅၂၈) မေတ္တာက အရမ်းကိုကြီးမား ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းပါတယ်။ စုန်ရေတဲ့။
ဖတဆိုးမို့ အလိုလိုက်ခဲ့တာ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝယူခဲ့တော့ နောင်တဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ မေတ္တာဆိုတဲ့ဆန်ရေကို ပြန်လည်လို့ပေးချင်ပေမယ့် လက်ခံနိုင်သူမရှိတော့ဘူး။ အမေ့ကိုအမြဲသတိရနေပါတယ်။
အားလုံးသော သားသမီးတွေ မိဘများရဲ့အနန္တကျေးဇူး နားလည်ဆပ်ဖူးနိုင်ကြပါစေ။
Anonymous January 5, 2013 at 6:37 AM
Han Thit January 29, 2013 at 11:31 AM
စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။မိဘနှင့်သမီးဆိုတာ မိဘဘက်က အမြဲအရှုံးပေးရစမြဲပါ။နာလည်ပေးပါတယ်။
Han Thit January 29, 2013 at 11:33 AM
မိဘဆိုတာ ဒီလိုဘဲ အမြဲတန်း အနစ်နာခံစမြဲပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးကို သနားပါတယ်။
yawm ngainpt January 29, 2013 at 11:38 AM
မိဘဆိုတာ အမြဲတန်း အနစ်နာခံရစမြဲပါ။ ဒါလေးကိုဖတ်မိတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေမိတယ်။ ဒို့မိတ်ဆွေ တွေလည်း ဒီစာလေးဖတ်ပြီးရင် သင်ခန်းစာ ရယူနိုင်ကြပါစေလို့။
yawm ngainpt January 29, 2013 at 11:45 AM
မိဘ ဆိုတာ အမြဲတန်း အနစ်နာခံရစမြဲပါ။ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရတော့ သားသမီးတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်ကြ တယ်။ မိဘကိုဦးစားမပေးဘူး။ဒါတကယ့်အဖြစ်ပျက်ဆိုရင်တော့သူ့သမီးလေး နောင်တရလိုဆုံးမှာမဟုတ် တော့ဘူးပေါ့။
အမှားနည်းလေ နောင်တတရားနည်းလေ တကယ်တော့ ဘဝအောင်မြင်မှုဆိုတာနောင်တ အနညိးဆုံးကိုပြောတာပါ